Indawo yasepulazini yomlingisi isethwe emaphandleni amahle - I-Airbnb
Indawo yasepulazini yomlingisi isethwe emaphandleni amahle
Hepburn, Saskatchewan, i-Canada
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Jarvis
U-Jarvis Ungumbungazi ovelele
Le ndlu enhle yasepulazini iyindawo yokuhlala ehlotshiswe ngombono omangalisayo womfula iNorth Saskatchewan, umhosha omangalisayo kanye nasemaphandleni. Lo muzi oneminyaka engu-110 usulungisiwe futhi ugcwaliswe ngokuthintwa zakudala. Jabulela umhlaba ngokubuka izinyoni, izilwane zasendle kanye nokuqwala izintaba. Umgodi womlilo ukuze ujabulele. Indawo futhi inengobo eneHayloft elungele Imishado emincane yaseRustic noma imibuthano yomndeni. Eliyingqayizivele yithuba lokuvakashela ihhashi lakho. Amakhorali anamanzi nendawo yokukhosela, hamba uyohlola!
Le ndlu yasepulazini eyimfihlo, ethokomele, engu-1100 sq. ft. enezitezi ezimbili igcwele imininingwane yasekuqaleni kanye nomlingiswa oveza ubuhle bomhlaba wakudala. Ikhaya linezinto zokhuni ezicebile, eziyiqiniso ezifana nezicabha ze-Douglas fir, flooring, nosilingi, namafasitela ahlotshiswe ngengilazi enemininingwane.
Izinga eliyinhloko elibanzi lihlanganisa ikhishi eligcwele, indawo yokuhlala kanye negumbi elinophahla oluphakeme lwe-9 ft., okuletha umuzwa wokuvuleleka. Iholwa izitebhisi ezinde, izinga eliphezulu linendawo yokufunda kanye namagumbi okulala amathathu anosilingi otshekile, adlulisa imfudumalo nokuthokomala.
Kukhona iwasha entsha nesomisi ongasisebenzisa ngenkathi usahlala kanye nezindlu zokugezela ezimbili zesimanje ezineziqephu ezintathu ukuhlalisa izivakashi eziningi.
4.92 · 116 okushiwo abanye
Lokhu kuyindlela eyodwa, yokubalekela yangasese kanye nokuphunyuka okumangalisayo kwedolobha.
Bheka ifilimu emfishane eyenziwe ngekwindla yokugcina endaweni (Izindaba Ezabiwe u-Harold Chapman
I-Affinity Youtube) U-Harold useqokwe njengesakhamuzi sonyaka sase-Saskatoon
I am passionate about the countryside, preserving the little that is left of the natural and untouched. There is a deep history of what the pioneers endured and accomplished so th…
Sithanda ukubingelela nokwamukela izivakashi zethu lapho zifika okokuqala, kodwa sinikeza izivakashi zethu ubumfihlo nendawo ngesikhathi sokuhlala kwazo. Sitholakala ngomlayezo wombhalo namakholi wefoni.
UJarvis Ungumbungazi ovelele